Akụkọ / Omenala - Noelson Chemicals Technology Co., Ltd.
Noelson Chemicals (Nanjing) Co., Ltd. na Noelson Micro-powder Industry Inc. nwere eguzosie ike, tumadi maka nyocha, mmepe na imepụta Micaceous Iron 0xide, Iron 0xide Magnetic na Natural Iron 0xide.
Site na 2000 rue 2005
tumadi eme nnyocha na mmepe na usoro nke antirust ink, Kacha ọhụrụ gburugburu ebe obibi enyi na enyi antirust ink na arụmọrụ fillers.
Anyị na-ewebata teknụzụ kemịkal dị elu na ihe ọmụma sitere na Northwest American, nwee ihe ịga nke ọma n'ịzụlite ngwaahịa nke Superfine Ferro-Phosphorus Powder, a na-akwalite ma nabata ngwaahịa ndị a n'ahịa. Ka ọ dị ugbu a, anyị na-aghọ onye isi ọrụ nke ịnye Superfine Ferro-Phosphorus Powder na China.
Anyị na-atụba onwe anyị na nyocha na mmepe na Zinc Phosphate, Aluminium Tripolyphosphate, na Phosphate Rust na-eguzogide Pigments, ngwaahịa anyị kachasị ọhụrụ nke na-emezu nkọwapụta zuru oke nke gburugburu ebe obibi. Ugbu a, anyị bụ otu n'ime ndị na-eduga na-emepụta na soplaya na Asia-Pacific mpaghara na ngwaahịa exported n'ụwa nile.
Nchikota nke webata na okike, anyị na-aga n'ihu na-emepe usoro Compound Ferro titanium, Compound Red Lead, Compound Antirust Pigment and Super Rust Powder. Ọtụtụ ingenious elu uzu, echesinụ àgwà akara, huu anyị na-edu ndú na ndị ụlọ ọrụ. Ngwaahịa anyị Ferro-Titanium Powder nke amatalarịrị n'ahịa ahụ, na-enweta oke ahịa ahịa na ụlọ ọrụ ahụ.
Noelson Chemicals (Shanghai) Co., Ltd. e guzobere, tumadi na-arụ ọhụrụ ngwaahịa mmepe na ahịa, ahịa na ime isi ọrụ na China.
Anyị na-amalite na-emepe emepe na mmepụta usoro nke Glass Flake, Glass Fiber, Glass Microsphere na Vitreous Microsphere, refrence na elu technology na chemical Nwa si Japan, British na USA, anyị bụ ndị mbụ emeputa ịzụlite dum ọgbọ ọhụrụ ngwaahịa izute mkpa maka ahịa na anụ ụlọ na esenidụt, na nkà na ụzụ nke anyị ngwaahịa iko flake nke pụrụ iru stardard nke mba ewere ngwaahịa.
Noelson Chemicals ebipụtala ọtụtụ akwụkwọ ikike na edemede na magazin ahụ. Dị ka (Superfine ferrophosphorus powder powder, development and research), (Ihe omuma ihe eji eme uzuzu ohuru na akuko nyocha) nke akwukwo ndi okacha amara, nke edeputara na akwukwo ndi ozo, nweta ulo oru.
Anyị mepụtara a ọhụrụ usoro nke conductive na antistatic ihe, dị ka High-edu Conductive Carbon Powder, Conductive Zinc Oxide, Conductive Polyaniline, Conductive Carbon Nonotubes, wdg Anyị na-agbalị ịbụ ndị na-eduga emeputa ke China mpaghara n'ime 5 afọ nke na-eweta ndị conductive ngwaahịa.
Akụkụ nke ngwaahịa anyị enweta“REACH "asambodo si Europe, Noelson nwetakwara IS09001 / 2008 asambodo.
Na Disemba 2010
Mmecha nke osisi ọhụrụ na Shanghai Nanhui.
Na Mee 2011
Emechara ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọhụrụ nke ngwaahịa ngwaahịa phosphate.
anyị ga-eme ngwa ngwa na mmepe na mmepe anyị, gbalịsie ike ka anyị bụrụ onye isi na-emepụta ngwa ngwa, na-arụ ọrụ pigmenti na ihe omume na mpaghara China na Asia-Pacific.